महोतरीले उचाल्यो प्रदेश स्तरीय महिला क्रिकेटको ट्रफि – CricPati
महोतरीले उचाल्यो प्रदेश स्तरीय महिला क्रिकेटको ट्रफि
क्रीकपाटी, ४ पुष राजबिराज ।
प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको लागि सप्तरीको राजबिराजमा संचालित प्रदेश नं. २ स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताको आईतवार सम्पन्न फाईनलमा महोतरीले सिरहालाई ८ बिकेटले पराजित गर्दै उपाधी माथी कब्जा गरेको छ । ( बिजेता महोत्तरी टिम )
राजरंगशालामा संचालित फाईनलमा सिरहाले टसजिती पहिलो ब्याटिंग गर्ने निर्णय गर्दै निर्धारित २० ओभरको खेलमा १६ ओभर ६ बलमा सम्पुर्ण बिकेट गुमाई ८६ रनको योगफल बनाएका थिए । सिरहालाई सस्तोमा समेटन शोभा आलेले घातक बलिंग गर्दै ५ ओभरमा १ मेडन सहित १२ रन दिई महत्वपुर्ण ४ बिकेट लिएका थिए । अन्य बलरमा बिमला मगरले ३ तथा रोजि कडारीले २ बिकेट लिएका थिए । ब्याटिंग तर्फ सिरहाका कविता गौतम २५, उर्मिला चौधरी १४ तथा सरस्वती चौधरीले १५ रनको योगदान दिएका थिए ।
(उपबिजेता सिरहा टिम)
८७ रनको झिनो लक्ष्य लिई मैदानमा ओर्लेको महोतरीले उक्त लक्ष्य १५ ओभर ५ बलमा २ बिकेटको नोक्सानीमा प्राप्त गरेका थिए । महोतरीका लागि बिमला मगरले अविजित ३१ त्था गोमा आलेले अविजित २५ रनको योगदान दिएका थिए भने रोजि कडारीले २१ रनको योगदान दिएका थिए । बलिंग तर्फ सन्तोषि चौधरीेले १ बिकेट लिएका थिए ।
खेलको म्यान अफ द म्याच महोतरीका शोभा आले भएका थिए ।
(म्यान अफ द म्याच महोतरीका शोभा आले)
प्रतियोगिता अर्न्तगत उत्कृष्ट बौलर महोतरीका रोजि कडारी, उत्कृष्ट ब्याटर सिरहाका अनुराधा चोधरी तथा प्लेयर अफ द सेरिज महोतरीका बिमला मगर भएका थिए ।
(उत्कृष्ट बलर महोतरीका रोजि कडारी)
(उत्कृष्ट ब्याटर सिरहाका अनुराधा चौधरी)
प्लेयर अफ द सिरिज महोतरीकि बिमला मगर) बिजेता, उपबिजेता तथा उत्कृष्ट खेलाडिहरुलाई कार्यक्रममा प्रमुख अतिथी राजबिराज नगरपालिकाका मेयर शम्भु प्रसाद यादव, तिलाठि कोईलाडि गाउँपालिकाका अध्यक्ष सतिश कुमार सिंह, नेपाल पत्रकार महासंघ नेपालका केन्द्रिय सदस्य अवधेश झा, प्रदेश क्रिकेट संघका उपाध्यक्ष सुनिल महासेठ, खेलकुद पत्रकार मंच सप्तरीका अध्यक्ष मनोज कुमार माझी, पुर्व अन्तराष्ट्रिय खेलाडि दिपेन्द्र चौधरी, राजबिराज नगरपालका वडा नं. ८ का वडा अध्यक्ष जयनारायण मण्डल लगायतले ट्रफि तथा प्रमाण पत्र बितरण गरेका थिए ।
सप्तरी क्रिकेट संघका अध्यक्ष एवं प्रदेश क्रिकेट संघका सचिव आयुश श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको संचालन सप्तरी क्रिकेट संघका सचिव चन्दन कुमार यादवले गरेका थिए ।